Mpanamboatra klôria sisa tavela - orinasa mpamatsy klorinina sisa tavela any Shina
CLG-6059T Mpanadihady Kôlôra Residual Online
CLG-6059T residue chlorine analyzer dia afaka mampiditra mivantana ny sôlaôma sy ny sandan'ny pH ao anaty masinina iray manontolo, ary manara-maso sy mitantana azy eo amin'ny seho takelaka fakan-tsary; ny rafitra dia mampifandray ny kalitaon'ny rano amin'ny alàlan'ny fanadihadiana an-tserasera, ny tahiry ary ny fikajiana kalibration. Ny fanangonana tahirin-kevitra momba ny klôma sy ny kalitaon'ny rano dia manome fahafaha-manao betsaka.
1. Ny rafitra mitambatra dia afaka mamantatra ny pH, ny chlorine sisa tavela ary ny mari-pana;
2. Fampisehoana lamba mikasika ny loko 10-inch, mora ampiasaina;
3. Fitaovana elektroda nomerika, plug ary fampiasana, fametrahana tsotra sy fikojakojana;
Ny membrane electrolyte sy osmotic dia mampisaraka ny santionany amin'ny sela sy ny rano, ny fonosana azo zahana dia afaka mifantina amin'ny ClO- penetration; eo anelanelan'ny elektroda roa dia misy fahasamihafana mety miorim-paka, ny tanjaka amin'izao fotoana izao vokariny dia azo ovaina ho fifangaroan'ny klôro sisa.
CL-2059-01 Sensor Klorinina residual an-tserasera
CL-2059-01 dia elektrônera handrefesana ny fotokevitra tsy tapaka tsy voatanisa, klôro rano, diôzida klôro, ozone. Ny fandrefesana ny herinaratra tsy tapaka dia mitazona ny herin'ny herinaratra miorina amin'ny lafiny fandrefesana ny electrode, ny singa samihafa dia mamokatra hamafin'ny herinaratra ankehitriny rehefa refesina.
YLG-2058 Mpanadihady Klôlôra Residual Industrial
YLG-2058 Industrial Online Residual Chlorine Analyzer dia mpandinika klôro vaovao sisa tavela ao amin'ny orinasanay; Izy io dia mpanara-maso an-tserasera avo lenta, Izy io dia misy ampahany telo: fitaovana faharoa sy sensor, sela mikoriana fitaratra voajanahary. Izy io dia afaka mandrefy ny chlorine residu, pH ary ny mari-pana miaraka. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fanaraha-maso tsy tapaka ny chlorine residual sy ny sandan'ny pH amin'ny kalitaon'ny rano isan-karazany amin'ny hery, zavamaniry rano, hopitaly ary indostria hafa.
CLG-2059S / P Mpanadihady Kôlôla Residual an-tserasera
ClG-2059S / P residual chlorine analyzer dia afaka mampiditra mivantana ilay chôlôla sisa tavela amin'ny masinina iray manontolo, ary mijery sy mitantana azy io amin'ny mpanara-maso; ny rafitra dia mampifandray ny kalitaon'ny rano amin'ny alàlan'ny fanadihadiana an-tserasera, ny angon-drakitra ary ny fikajiana calibration ao anaty iray, ary ny angon-drakitra Chlorine sy ny fandalinana no manome fahafaha-manao betsaka.
1. Ny rafitra mitambatra dia afaka mandrefy ny chlorine sisa tavela sy ny mari-pana;
2. Miaraka amina mpanara-maso tany am-boalohany dia afaka mamoaka famantarana RS485 sy 4-20mA izy;
CL-2059A Mpanadihady Kôlôra miaina an-tserasera
CL-2059A dia mpamakafaka klorinina sisa tavela amin'ny indostria, miaraka amin'ny faharanitan-tsaina avo lenta. Izy io dia afaka mandrefy ny chlorine sy ny mari-pana mijanona miaraka. Izy io dia be mpampiasa amin'ny indostria toy ny famokarana herinaratra mafana, rano mandeha, fanafody, rano fisotro, fanadiovana rano, rano madio indostrialy, famonoana otrikaretina residual chlorine residual monitoring.